कम्युनिस्ट फुट्दा विभाजित हुने काङ्ग्रेस !
मुख्य पृष्ठराजनीति विचार विश्लेषणकम्युनिस्ट फुट्दा विभाजित हुने काङ्ग्रेस !
‘बिपी कोइरालाले घिउ खाएका थिए हाम्रो हात सुँघ–सुँघ’ भन्न छोडेको छैन नेपाली काङ्ग्रेसले । यतिबेला बिपीको राजनीतिक दर्शन, मूल्य र मान्यता एकातिर छोडेर, अर्कोतिर समाजवाद पाइन्छ भन्दै बरालिएको अवस्थामा छ, काङ्ग्रेसजनको नियति । हुँदाहुँदा फुटेको कम्युनिस्ट पार्टीको कुन टुक्रा ठीक र कुन टुक्रा बेठिक भन्ने विषय लिएर केन्द्रीय समितिमा बहस हुन थाल्यो । गर्नेलाई भन्दा देख्नेलाई लाज ।
नेकपा के कारणले फुट्यो जगजाहेर छ । सत्ता स्वार्थले फुट्यो, पद बाँडफाँड नमिलेर फुट्यो, बढीभन्दा बढी भ्रष्टाचार गर्न पाउने मन्त्रालय नपाएर फुट्यो, देश लुट्ने प्रतिस्पर्धामा तँ अघि जाने कि म भन्ने हानथापले फुट्यो । यदि जनादेशअनुसार सक्कली प्रतिपक्ष थियो नेपाली काङ्ग्रेस भने कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले देशलाई कति क्षति पुर्‍यायो ? जनसरोकारका कुरालाई किन तिरस्कार गर्‍यो र के कारणले पार्टी फुटाए भन्ने कुराको जानकारी जनतालाई दिनुतिर पहिलो दिनदेखि नै लाग्नुपथ्र्यो । जे गर्नुपथ्र्यो काङ्ग्रेसले त्यो गरेन । केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा देउवा ओली–पूजक देखिए र रामचन्द्र प्रचण्ड–पूजक ।
के साँच्चै नेपाली काङ्ग्रेसमा विचार सकिएको हो ? चिन्तन सकिएको हो ? जनताप्रतिको जिम्मेवारी समाप्त भएको हो ? होइन भने किन संसद् भङ्ग गर्ने ओलीको असंवैधानिक कदमप्रति भित्री रूपमा देउवाको पनि साथ–समर्थन रहेको आरोप सञ्चारमाध्यममा छताछुल्ल भइरहेको छ ? संवैधानिक समितिमा ओलीले देउवाका मान्छे नियुक्ति गर्नेबित्तिकै देउवाले ओलीका अलोकतान्त्रिक कदमलाई समर्थन गर्नुपर्ने, प्रचण्डले राष्ट्रपतिको हरियो घाँस देखाउनेबित्तिकै रामचन्द्र पौडेल प्रचण्डको समर्थनमा हामफाल्नु पर्ने ? के नेपाली काङ्ग्रेसको आफ्नो कार्यक्रम छैन ? उसको आफ्नो साख र गरिमा सकियो ? र अरू पार्टीको मान्छेको पुच्छर समातेर हिड्नु पर्ने ?
काङ्ग्रेसको साथ पाएमा अविश्वासको प्रस्ताव पास हुनेछ र प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्नेछन् । तर त्यसबेलासम्म ओली समूहको नेकपा त सकिन्छ नै नेपाली काङ्ग्रेस पनि बाँकी रहँदैन ।
नेपाली काङ्ग्रेस राणाकालमा जन्मिँदैदेखिको संसद्वादी पार्टी हो । पुष्पकमल दाहाल पछि परिबन्दले मात्र संसदीय परिपाटी स्वीकार गरेका मान्छे हुन् । उनको दीर्घकालिन लक्ष्य फरक छ । त्यसैकारण संसदीय पद्धतिको बदनाम गर्न चाहन्छन्, प्रचण्ड । उनको राजनीति छलछाम, धोकाघडीबाट अर्काको टाउकामा टेक्तै शिखर चढ्ने उनको नीति हो । कुनै बेला गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई राष्ट्रपतिको सपना बाँडेर अगाडि बढे । देउवालाई आमनिर्वाचनको गुलियो बाँडेर छोरीलाई मेयर बनाए अनि सियो बनेर एमालेसँग मिले, अहिले फाली बनेर निस्किए । उनको असली चरित्र यतिबाटै प्रष्ट हुन्छ । अहिले रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपतिको लड्डु दिँदै छन् । यति मूल्याङ्कन गर्न नसक्नुको कारण काङ्ग्रेसका नेताहरूको विद्यमान स्वार्थन्धतामात्र हो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानविपरीत गएर प्रतिनिधिसभा विघटन गराएका छन् । यस कर्मविरुद्ध उभिनु जुनसुकै प्रतिपक्षको कर्तव्य हुन जान्छ । यो विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले कायम राखिदियो भने, कसैले पनि सर्वोच्च अदालतमा ढुङ्गा हान्न जाने कुरा आउँदैन । त्यसबेला निर्वाचनलाई स्वीकार गरेर जानुपर्छ । राष्ट्रपति वा प्रधानन्यायधीशले संविधानविपरीत काम गरे भने उनीहरूमाथि महाअभियोग लगाउन सक्नुपर्छ ।
यदि सर्वोच्च अदालतले विघटन उल्टाइदियो भने पनि मुलुक मध्यावधिमा जान्छ । त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीविरुद्ध प्रचण्ड समूहबाट अविश्वासको प्रस्ताव आउनेछ । त्यो समूहले काङ्ग्रेसको साथ खोज्नेछ । त्यस बेला काङ्ग्रेसको साथ पाएमा अविश्वासको प्रस्ताव पास हुनेछ र प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्नेछन् । तर त्यसबेलासम्म ओली समूहको नेकपा त सकिन्छ नै नेपाली काङ्ग्रेस पनि बाँकी रहँदैन ।
नेपाली काङ्ग्रेस बचाउनु छ भने उसको आफ्नो कार्यक्रम हुनुपर्छ । देउवा प्रवृत्ति र रामचन्द्र प्रवृत्तिमा झाँगिएको लोभ छोडेर आफ्नै खुट्टामा उभिनुपर्छ । यो आशय डाक्टर शेखर कोइरालाबाहेक अरूमा देखिएको छैन । सबै भन्छन्– काङ्ग्रेस सकिने आफ्नै कारणले हो ।
अलोकतान्त्रिक काङ्ग्रेस विघटन